prabhu life insurance company limited(prabhu life insurance company limited) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
आउँदो आइतबारबाट प्रभु लाइफको दोस्रो बजारमा कारोबार खुल्ने, ओपनिङ रेन्ज कति ?
काठमाण्डौ । प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको धितोपत्र कारोबार आगामी साताको आइतबारदेखि हुने भएको छ। प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकरणका लागि निवेदन दिइसकेको छ। सीडीएससीमा पनि आवेदन दिने प्रक्रियामा रहेको कम्पनीका सीईओ नारायण पौडेलले जानकारी दिए। भोलि वा पर्सिसम्म नेप्सेमा कम्पनीको धितोपत्र सूचीकृत हुने...
प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको आईपीओ बाँडफाँड, रिजल्ट केहीबेरमै बिजशालामा हेर्न सकिने
काठमाण्डौ । प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको आईपीओ आज शुक्रबार बाँडफाँड गरिएको छ। धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडको काठमाण्डौको नक्सालस्थित नारायणचौमा रहेको कार्यालयमा बिहान ११ बजे आईपीओ बाँडफाँड गरिएको हो। आईपीओ बाँडफाँडपछि अन्तिम रिजल्टसमेत केहीबेरमा बिजशालामा प्रकाशित हुनेछ। प्रभु...
प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको आईपीओ आज बाँडफाँड हुने
काठमाण्डौ । प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको आईपीओ आज शुक्रबार बाँडफाँड हुने भएको छ। धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडको काठमाण्डौको नक्सालस्थित नारायणचौमा रहेको कार्यालयमा बिहान ११ बजे आईपीओ बाँडफाँड हुने भएको हो। मागभन्दा बढी आवेदन परेका कारण यो आईपीओको बाँडफाँड पनि गोलाप्रथाबाट हुनेछ। प्रभु...
प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको आईपीओ बाँडफाँड भोलि, कतिले पाउने ? कतिले नपाउने ?
काठमाण्डौ । प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको आईपीओ भोलि शुक्रबार बाँडफाँड हुने भएको छ। धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडको काठमाण्डौको नक्सालस्थित नारायणचौमा रहेको कार्यालयमा बिहान ११ बजे आईपीओ बाँडफाँड हुने भएको हो। मागभन्दा बढी आवेदन परेका कारण यो आईपीओको बाँडफाँड पनि गोलाप्रथाबाट हुनेछ। प्रभु...
काठमाण्डौ । प्रभू लाइफ इन्स्योरेन्सले आगामी मंसिर २९ गतेदेखि आइपीओ निश्कासन गर्ने भएको छ । यो कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरका ६० लाख कित्ता साधारण सेयरको प्राथमिक निश्कासन गर्ने भएको हो । आइपीओमा छिटोमा पुस २ गतेभित्र आवेदन दिइसक्नुपर्नेछ । सो अवधिभित्र सबै आइपीओ बिक्री भएन भने ढिलोमा पुस १३ गतेसम्म आवेदन दिनसक्ने गरी मिति...